IDiploma- i-3D yeNgcali yeModeli- iGeofumadas
Ikhaya/IiDiploma zeAulaGEO/IDiploma- i-3D yeModeli yeNgcali
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwicandelo lemodeli ye-3D, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngendlela ebanzi. Ngokunjalo, abo banqwenela ukuncedisa ulwazi lwabo, kuba bayinxalenye yesoftware kwaye banqwenela ukufunda ukulungelelanisa uyilo olunemilinganiselo emithathu kwimijikelezo eyahlukeneyo yokufumana, ukumodareyitha kunye nokuchithwa kwedatha yezinye usetyenziso.
Yenza amandla okufumana, ukumodareyitha kunye nolungiselelo lweemodeli ezinamacala amathathu. Le khosi ibandakanya ukufundwa kwe3DS Max, enye yeenkqubo ezisetyenziswa kakhulu kwicandelo lokumodela; kunye nokusetyenziswa kwezixhobo apho ulwazi lunxibelelana nolunye usetyenziso, njengeRecap kunye neBlender. Ukongeza, ibandakanya ikhosi yoHlaziyo loYilo lokuqonda indlela imodeli esebenza ngayo phantsi kwendlela ye-BIM kunye ne-Inventor Nastran yokufunda ngemodeli kunye nohlalutyo lwenxalenye kwimveliso.
Izifundo zinokuthathwa ngokuzimeleyo, ukufumana idiploma kwikhosi nganye kodwa "IDiploma yoLwazi lweModeli ye3D” ikhutshwa kuphela xa umsebenzisi ethathe zonke iikhosi kuhambo.
Izibonelelo zokufaka isicelo kumaxabiso eDiploma- i-3D Modeling Expert
Sketchup ……………………………… .. iUSD 130.00 24.99
Ii-3Ds Max ……………………… i-USD 130.00 24.99
Ukuphinda Ummodeli ……………………… i-USD 130.00 24.99
Hlaziya uyilo …………………… i-USD 130.00 24.99
IBlender-Imodeli yeSixeko… .USD 130.00 24.99
Hlaziya iSikhosi se-MEP-uFakelo lwemibhobho